Olee otú ị ga-esi na-achọpụta ngwaahịa dị na Amazon?
Onye ọ bụla na-ere ahịa n'Ịntanet maara otú ị ga-esi na-achọpụta ngwaahịa na Amazon. Ihe bụ na ọ dịghị ụzọ ọzọ ị ga-esi nọrọ ebe ahụ dịka onye na-ere ahịa, ọ gwụla ma ị na-eme ihe kachasị mma iji melite ọnọdụ gị n'ọchịchọ ka ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị mmadụ ga-ahụ ya. Rịba ama, Otú ọ dị, na ọ na-agbanwe mgbe niile A9 search ogo algorithm, ahịa Amazon chọrọ ka ị nọgide na-adapting ya ọhụrụ eziokwu. Ka o sina dị, e nwere ụzọ amapụtara nke nwere ike inyere gị aka ịghọta otú ị ga-esi na-achọpụta ngwaahịa na Amazon ka ihe ndị ị nyere maka ire ere n'ebe ahụ ga-ahụ mgbe niile maka òkè ndị ọdụm gị.N'okpuru ebe a, m ga-egosi gị otu esi arụcha ọrụ ahụ kachasị mma.
Olee otú ị ga - esi nọrọ na Amazon Product Search
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ị ga - achọpụta isi ihe nke isiokwu gị nwere ike inweta. Iji mezuo ọrụ ahụ, ana m akwado iji Keyword Planner, Google na-eme nchọpụta nchịkọta ihe nchọgharị dị na oghere. Ọfọn, ezigbo onye inyeaka ntanetị a bụ ezigbo mmalite maka ịmalite ịkọwa isi gị na isi okwu ọchụchọ na ogologo oge ọchụchọ. Ozugbo emechara ya, ị ga-achọ ịmechapụ oke ndepụta gị n'ime ederede kachasị dị mkpirikpi nke nwere naanị mkpụrụ okwu ga-emerịrị naanị. Ee, ọ nwere ike iyi ọrụ dị egwu ma na-ewe oge, ma ọ dị mma na e nwere ọtụtụ ngwá ọrụ dị iche iche nke ahaziri maka ntinye ihe omimi nke dị na Amazon.
Nke a bụ ebe ị nwere ike ịhọrọ site na: Sellics (kachasị mma maka nchọpụta mbụ nke Amazon), Sonar (dị mma maka ịchọta mkpụrụokwu bara uru ọ bụla dị mkpa iji kwado ngwaahịa gị), LSI Graph (ngwá ọrụ n'efu, enyere gị aka ịghọta otú ị ga-esi na-achọpụta ngwaahịa dị na Amazon - site na iji edemede nke ngwaahịa gị ma ọ bụ onye ọ bụla ị na-ere na ya), Moz (ọrụ nyochaa njinchọpụta mbụ nke e mere maka ọdịnaya ezubere iche njikarịcha maka okwu ndị dị mkpa), Thesaurus (ee, nke dị oké njọ, ọ bụ otu n'ime ihe ndị a na-enyochaghị nke ọma na ngwaahịa, karịsịa maka Amazon - ya mere na ị gaghị eji ya maka ịsọ asọmpi, nke ziri ezi?).
Ma ebe a bụ nhọrọ ndị ọzọ a na-eji eme ihe na aro ndị dị irè iji wepụta ọkwa nke ọma na ngwaahịa Amazon, ọbụna ma ọ bụrụ na ị ka bụ onye novice online nwere ike ire ere maka oge mbụ:
Alala azụ ịnye ego maọbụ ụfọdụ ahịa dị ịtụnanya - ọ bụ ụzọ sneaky na-eme ka ịzụlite mgbanwe ngwaahịa gị site na mmalite.
Jide n'aka na ị na-enye ndị ahịa gị afọ ojuju (na-edebe nyochaa Star Ratings na Order Defect Rate n'ebe ahụ).
Nọgide na-enwe ngwaahịa zuru ezu ngwaahịa nnweta.
Ọ bụ ezie na ọ na-esiri ike ịme ya ka ọ bụrụ nke a na-achịkwa, ana m ekwusi ike ịṅa ntị nke ọma na Ọnụ Ọpụpụ nke onye ahịa gị.Ọ bụ ihe dị oké mkpa metrics, karịsịa mgbe ọ na-abịa n'ịtụle ngwaahịa gị na Amazon ihe ịchọ Source .